Cunnooyinka la farsameeyo iyo khataraha caafimaad ee ay leeyihiin | Ragga Stylish
Cunnooyinka la warshadeeyay ayaa lala xiriiriyay cudurro fara badan, gaar ahaan waxa loogu yeero cunnooyinka aadka loo farsameeyay. Marka Haddii waxa aad cunayso badankood la baakadeeyey, waa inaad waxoogaa isbeddel ah samaysaa si loo ilaaliyo caafimaadkaaga.
Aan aragno waa maxay cuntooyinkan qof walba ka hadlayo waayadan dambe iyo maxay waxyeello u leedahay in si xad dhaaf ah loo liqo iyaga.
1 Maxay cuntooyinka warshadaysan waxyeello u leeyihiin?
2 Ogow cuntooyinka la warshadeeyay
2.1 Alaabada quraacda
2.2 Hilibka la farsameeyay
2.3 Cunnooyinka microwave
Maxay cuntooyinka warshadaysan waxyeello u leeyihiin?
Si ka duwan cuntooyinka cusub, cuntooyinka warshadaysan waxaa lagu soo rogaa isbeddello hagaajiya dhadhankooda iyo noloshooda. Tan awgeed, cusbo, sonkor, baruur iyo walxo macmal ah ayaa loo isticmaalaa oo u taagan magacyadooda adag in lagu dhawaaqo.
Taas awgeed, qaar ka mid ah cuntooyinka la warshadeeyay waxay labanlaabmi karaan qadarka maalinlaha ah ee lagu taliyo ee soodhiyamka, sonkorta, ama dufanka. Taabadalkeed, badiyaa waxay ku liitaan maaddooyinka lagama maarmaanka ah, sida fiber. Marka la eego taas, ka sakow waxyeelada ay leeyihiin, ma ahan kuwa nafaqo badan leh ama si toos ah "madhan" kaloriisyada, layaab ma leh in khubarada caafimaadku kula taliyaan in laga fogaado isticmaalkooda, ama ugu yaraan la xaddido inta ugu badan ee suurtogalka ah. Waxyaabaha kale, cuntooyinka warshadaysan waxaa lagu tiriyaa buurnida sii kordheysa.
Sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee loo diyaarinayo, ayaa marba marka ka sii dambeysa u sii badaneysa daaweynta cunnadu waxay noqonaysaa, sidaas awgeedna, ayay u sii waxyeelo badan tahay isticmaalkiisu caafimaadka. Waa waxa loo yaqaan cuntada aadka loo warshadeeyay, cuntooyinka kugu duufsanaya dhadhankooda aan la adkeysan karin iyo, wixii ka sarreeya, maxaa yeelay waxay diyaar u yihiin inay isla markiiba cunaan ama kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku kululeyso microwave-ka. Cunto-kariyeyaasha, hilibka la farsameeyay iyo keega warshadaha ayaa ka tirsan kooxdan.
Aqoonsiga cuntada la warshadeeyay waa mid fudud (badanaa waxay la yimaadaan xirmooyin), laakiin ka takhalusiddooda xagga cuntada ayaan sidaa u sii fududaanayn. Istaraatiijiyad wanaagsan ayaa ah eeg calaamadaha ugu yar ee dufanka, cusbada, ama sonkorta ah si loo doorto ikhtiyaarka "caafimaad". Xaalado badan waxaa layaab leh inta farqi ee u dhexeyn karo laba shey oo isku mid ah.
Ogow cuntooyinka la warshadeeyay
Haddii aad rabto inaad yareyso cunnooyinka la warshadeeyay, kuwa soo socdaa waa bilow wanaagsan. Waxaad u maleyneysaa inaad cunayso mid ama in ka badan oo iyaga ka mid ah maalin kasta.
Waxaa jira noocyo badan oo cuntooyin warshadaysan ah oo loogu talagalay quraacda, oo ay ku jiraan badarka, buskudka, rootiga la jarjaray, iyo margarine.
Maraakiibta qaar waxay ku jiraan dufanka trans, kuwaas oo xitaa ka caafimaad daran dufanka buuxa. Noocyada dufanku waxay kordhiyaan halista cudurka wadnaha. Waxay sidoo kale yeelan karaan nooc ka mid ah xiriirka kansarka.
Si baaskiil beddelka caafimaadka leh ee quraacdaada, tixgeli boorashka (u fiican hel tamar subaxdii), berry, lowska, rootiga miraha laga sameeyo iyo miraha noocyadooda kala duwan, oo ay ku jiraan avokado caafimaad qaba.
Hilibka la farsameeyay
Guud ahaan, daawo cunista hilib kasta oo si uun loogu farsameeyay. Laguguma talinayo inaad ku xadgudubto sausages, jeexan qabow ama hilib doofaar.
Bacon wuxuu hodan ku yahay sodium, fat fat, iyo walxaha ilaaliya. Sidaa awgeed, cunista xad dhaafka ah hilib doofaarkan la cabayaa wuxuu sababi karaa madax xanuun iyo culeys xad dhaaf ah ilaa dhiig kar iyo kansar.
Diyaar garowgeeda degdegga ah ee degdegga ah ayaa cirka isku shareeray caan ka ahaanshaha baastada degdegga ah iyo cuntooyinka kale ee microwave-ka ah. Si kastaba ha noqotee, cilladaha alaabtan ayaa ka culus faa'iidooyinka. Waxay ka buuxaan cusbo, taas oo kor u qaadaysa cadaadiska dhiigga, waxtarkooda nafaqadeeduna aad ayuu u hooseeyaa.
Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad iska ilaaliso saloolka microwave. Haddii aad ka mid tahay kuwa aan u bogin filim la mid ah haddii uusan la socon weel salool ah, tixgeli kernels salool. Waxay ku lug leeyihiin xoogaa shaqo ka badan, maaddaama ay tahay inaad adigu iyaga u kariso, laakiin dadaalku wuu u qalmaa, maaddaama natiijada ay aad uga caafimaad badan tahay.
Ketchup waa suugo yaanyo ah, yaanyada oo ah cunto aan ka maqnaan karin cunno kasta oo caafimaad loo arko. Dhibaatadu waa taas xaddi badan oo sonkor ah iyo cusbo ayaa lagu darayaa. U isticmaal si dhexdhexaad ah (si gaar ah iyo qaddar yar) ama, si ka sii wanaagsan, u samee ketchup kuu gaar ah oo caafimaad u leh dufankaaga iyo shiilankaaga.
Sida muuqata way ku filnaan laheyd hubi in cuntada la warshadeeyay aysan ka badnaan 20 boqolkiiba cuntadaada. Si kale haddii loo dhigo, boqolkiiba 80 waxa aad cunayso maalin kasta waa inay cusub ahaadaan. Haddii aad hesho, horay ayey u noqon laheyd horumar weyn, maxaa yeelay waxaa lagu qiyaasaa in waxa caadiga ah ay yihiin in lagu cuno mid cusub oo si ficil ahaan loogu shaqeynayo qaybo siman.
Ugu dambeyntii cuntooyinka la warshadeeyo oo dhan maaha kuwo waxyeello leh. Caanuhu waa tusaale, xoolaha iyo khudradda labadaba. Daaweyntu faa'iido ayey u leedahay labada xaaladoodba. Fiitamiinnada iyo macdanaha waxaa lagu daraa caanaha soya ama oat si dadka aan rabin ama aan cabi karin caanaha lo'da ay sidoo kale ugu raaxeysan karaan waxyaabaha ay leeyihiin.
Khudradda qasacadaysan, khudradda, digirta iyo kalluunka ayaa sidoo kale laga heli doonaa dhinaca "wanaagsan" ee cuntooyinka warshadaysan.. Xaqiiqdii, khudaarta la qaboojiyey qaarkood waxay bixiyaan fiitamiino ka badan kuwa cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntooyinka warshadaysan